Bastoolad cadaadis Clamps-saareyaasha iyo Shirkado cusub | Dhur Shiinaha bastoolad Clamps Factory
haysa ganaax danab sare waxaa loo sameeyey si loo taageero kaari iyo insulators in khadadka gudbinta dusha. In ay ku xidhmaan cable awood u leeyahay inuu insulator ah.
Tani hardware korontada loo isticmaalo la AAAC, ACSS, ACSR, nooc u dhashay oo waxay qariyeen of kirishbooyada gudbinta.
The clamps taageeraya yihiin oo keliya ma aha, waayo, danab sare khadadka gudbinta korontada, laakiin sidoo kale ay isticmaali la fiilooyinka fiber optic (OPGW - fiilooyin dhulka indhaha) iyo ADSS (oo dhan-dielectric is-taageeraya), waxaa ka mid ah ulihii preformed. Macluumaadkan waxaa lagu muujiyay in goobta qaybinta fiber optic of our web site.
clamps eryiddu ilaaliyo cable markii ugu rarataan culaysyo rakibo, xakameeyo mooshinka jagada of kaari dabayl la oscillation, gariirka, iyo in la yareeyo walaaca korontada. sii daayo of load ku qeexan waxaa ay gacanta ku hayeen axial, kaas oo lagu hagaajin karo si hufan si ay u hor istaagi xoog loo baahan yahay ee danab sare cable anteeno koronto.
The shirka ganaax danab sare loo soo bandhigi karaa isha godka, pole clevis habboon, u-clevis, godka si waafaqsan shuruudaha macaamiisha ee.
haysa ganaax loo isticmaalo halkaas oo ay ku naf dhibkeed firfircoon weyn laga yaabaa inuu dhaco. Dhibaato design uga cadhooday, iyo xubno ka xoog sare loo yareeyo halista waxyeellada line awoodda dusha.
clamps ganaax danab High ka samaysan yihiin
* Maquufin kulul galvanized dhiman birta ka dhiibtay
Hardware - maquufin galvanized steel kulul
accessories ganaax danab High maray iska caabin ah daxalka, baaskiil heerkulka iyo imtixaanada gaboobaya.
Aluminum xidhay haysa dhur
haysa xiisad Jr-85
Ka dhiibtay Iron xidhay Nooca dhur haysa